Banyere Anyị - Dongguan Xianglin Plastic Product Co., Ltd.
Quality bụ a na-akpata nke ụlọ ọrụ na-eme ka mba compromises.With 100,000 larịị ọcha omumuihe na n'elu 15,000 square mita osisi, mmepụta mmepụta esịmde 500,000 tent kwa ụbọchị. Ahaziri akpa na-ekpo ọkụ stamping, ihuenyo obibi, ire ọkụ pating bụ offerable.
Xianglin anọgide na-agbalịsi ike gafere ahịa anyị 'na-atụ anya nke ma ngwaahịa mma na ahịa ọrụ. Xianglin ukwuu zụọ ahịa ọrụ na-anọchite anya na-arụ ọrụ aka-na-na-aka na ndị ahịa anyị na-ekpebi ndị kasị mma na ngwaahịa ha mkpa ha.
Anyị oru ọkachamara nwere ọtụtụ aka-na na ahụmahụ na ngwaahịa na anyị na-Nlụpụta na dị mfe zaa ajụjụ niile. Na Xianglin, anyị routinely sochie na ahịa anyị iji hụ na 100 percent ngwaahịa afọ ojuju.
Easy ịtụ - gị oke
Anyị dum ngwaahịa akara dị maka ịtụ 24 awa a ụbọchị.
Anyị nwere obi ụtọ kwuo! Biko zitere email to: amy_wen@dgxianglin.com
Maka mbupu atụmatụ, biko na-ezigakwa email to: amy_wen@dgxianglin.com
Anyị na-anabata 30% ego site T / T, 70% itule tupu nnyefe.
FOB Shenzhen, ma ọ bụ Guangzhou.
Iwu ga-ụgbọ mmiri 'prepay na tinye' FOB mbupu ebe. Ọ bụrụ na e a họọrọ ụgbọelu, biko mara na a na 'comment' ebe nke iji. Na-ekwu maka ọnwụ ma ọ bụ mmebi n'ụzọ na-aga ka ozugbo (n'ime ụbọchị 30) na kwuru na akwụkwọ ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ihe ahụ yiri ka visable mmebi site gbasie, kpọtụrụ anyị n'ime awa 48 nke nnyefe.
N'ihi na ibu butekwara, ọ bụla na niile ụkọ na emebi obosara ga-dere na Bill ngwaahịa ma ọ bụ Freight Bill. Kwesịrị na ị chọpụta na ihe ọ bụla na-emebi ma ọ bụ na-efu, ị ga-mara ihe, na ndiiche, na ọnọdụ tupu ị banye na ya.
Your mbinye aka na-anapụta ụgbọelu si ibu Bill ngwaahịa (BOL) werekwa nnabata nke ngwá ahịa dị ka bụ na dị mma. Ọ bụrụ na ị na-inyocha tupu ịbanye na ị bụ, ihe niile bara uru na nzube, waiving nri na-anakọta na a mmebi-ekwu ọbụna ma ọ bụrụ na mmebi a chọpụtara mgbe e mesịrị (mara dị ka zoro ezo mmebi).
All ihe na-ekwesị site na emeputa megide kpatara nanị ntụpọ rụọ ma ọ bụ ihe. Gwụla ma ma kwuru na ide, na-ere ákwà na-eme ka mba akwụkwọ ikike na containers, closures, na ihe ọ bụla ihe ndị ọzọ e sere ma ọ bụ kọwara n'isiokwu a bụ kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ na-nzube.
Na ihe omume nke a laghachi, biko na-akpọ maka a iwu clamers.
All ígwè obibi akwụkwọ ihe ndị na-abụghị returnable. No.